Mapato Anopikisa Anokuridzirwa Kugadzirisa Zviri Kuanetsa
VaMorgan Tsvangirai naVaWelshman Ncube
Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mapato anopikisa muZimbabwe anofanirwa kubatana kana achida kubudirira.
Vanoongorora zvematongerwo enyika, VaTakura Zhangazha, vanoti parizvino vanhu havasi kunyatsoona kuti zvinhu zvichafamba sei sezvo mapato mazhinji aine zvinoanetsa mukati mawo.
Vanotizve kubato guru rinopikisa, reMDC-T, hazvisi pachena zvichaitika sezvo nenyaya yehutungamiri kana mukuru webato iri uye mukuru we MDC Alliance, VaMorgan Tsvangirai vakasanaya zvakakwana kutungamira mapato aya.
“Opposition, kana kuti vanopikisa Zanu-PF, vari parumana nzombe. Vanofanira kugadzirisa zvinhu zvavo mukati meba yavo vasati vatanga kufunga kuti vangakunda Zanu-PF pasarudzo dzirikuuya idzi,” vakadaro VaZhangazha.
“Pari zvino, hazvisikunyatso zikanwa kuti mutungamiri MDC-T, anove futi mutungamiri weMDC Alliance, VaTsvangirai, varikunzwa sei uyezve kuti vachakwanisa here kutungamira bato ravo neMDC Alliance pasarudzo dziri kutevera.”
VaZhangazha vanoti nguva ishoma zvekuti mapoka anopikisa anofanira kukurumidza kugadzira zvinhu kupa nguva kuvanhu vanovatsigira kuti vavone pavamire.